ट्रेड युनियनका मागप्रति बेवास्ता - प्रशासन
‘खोला तर्यो लौरौ बिर्स्यो’ । यो नेपालीमा चर्चित उखान हो । समयसँगै जसरी परिस्थिति बदलिन्छ, आवश्यकता पनि त्यही अनुरूप परिवर्तन हुँदै जान्छन् ।
भनिन्छ, अनुकूल हुँदा सबै बलिया हुन्छन् । बलिया हुन हारगुहार गर्छन् । तर, बलिया भएपछि अरुलाई कमजोर ठान्छन् । त्यसैले शक्ति र पहुँच भएकाले यि कुराको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गर्दै ‘सत्ता कब्जा’ गरेपछि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता सडक छाप भए । ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि राजनीतिक दलका नेताको छटपटाहट बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । त्यो लामो संघर्ष र बलिदानीपछि स्थापना भएको प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार थियो । प्रजान्तन्त्रिक पक्षधरले यसलाई सहजरूपमा लिने अवस्था समेत थिएन ।
तर, राजनीतिक दलको रवैयाबाट आजित जनताले राजनीतिक नेतालाई सजिलै साथ दिएनन् । सात राजनीतिक दलको आह्वानमा भएको सडक आन्दोलनले रत्नपार्कमा सडक जाम समेत हुँदैनथ्यो । जनता सहभागी नहुँदा आन्दोलनले उचाई लिन सकेको थिएन, जब नागरिक समाज र निजामती कर्मचारीसहित पेशाकर्मीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । त्यसपछि जनआन्दोलनको स्वरूप लियो । ०६२/६३ मा जनआन्दोलन सफल पनि भयो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना त्यही आन्दोलनको जगमा भएको हो । त्यसपछि पुनः राजनीतिक दलको हातमा सत्ता पुग्यो ।
राजनीतिक दलले निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलनपश्चाद ट्रेड युनियनको अधिकारसहित बढुवा गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । त्यही विश्वासमा निजामती कर्मचारी र पेशाकर्मी आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को संशोधन गरी २०६४ सालमा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था गरियो । सोही अनुसार राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको गठन र दर्ता भए । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीचको सहभागितामा निर्वाचनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन समेत भइसकेको छ । तर, आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई निजामती सेवा ऐनले खोजेको जस्तो भूमिकामा सरकार र प्रशासकले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीका प्रतिनिधिकारूपमा समेत महत्वपूर्ण स्थान दिए जस्तो लाग्दैन ।
नेपालको संविधान २०७४ को कार्यान्वयनको सिलसिलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि समायोजन ऐन जारी भइसकेको छ भने नियमावली बन्ने प्रक्रियामा छ ।
संघीय निजामती सेवा संचालन ऐनको मस्यौदा छलफलका क्रममा छ । त्यस ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । यही अवस्थामा संघीय निजामती सेवा संचालन ऐन जारी भए निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन खोल्न र दर्ता गर्न पाइने छैन । अहिलेजस्तो आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन समेत हुने छैन । तर, निजामती कर्मचारीलाई संगठनरहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छनोट हुने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था राख्न राष्ट्रियस्तरका र आधिकारिक ट्रेड युनियनले आवाज उठाइरहेका छन् । कर्मचारीको संगठित आवाज दबाउन र आफ्नो मोनोपोली कायम राख्न उच्च प्रशासकको डिजाइनमा यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरिँदैछ । यसमा राजनीतिक दलका नेतासमेत कनभिन्स रहेको अवस्था छ ।
जायज पेशागत मागका लागि संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिने कार्य कदापी लोकतन्त्र पक्षधरलाई मान्य हुँदैन । यसको फाइदा उच्च प्रशासकले लिइरहेका छन् ।
पेशाकर्मीको ढाडमा टेकेर ज्ञानेन्द्रको सत्ताच्यूत गर्दै सत्तामा पुग्न सफल राजनीतिक दल कर्मचारीलाई कमजोर बनाउनका लागि ट्रेड युनियन अधिकारमा रोक लगाउन उद्धत रहेको ट्रेड युनियनको आरोप छ । निजामती कर्मचारीमा भएको राजनीतिक विभाजनको फाइदा राजनीतिक दलले लिने गरेका छन् । राजनीतिक दलले आवश्यक परेका बेला निजामती कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने र आवश्यकता पूरा भएपछि विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन् ।
ट्रेड युनियन व्यवस्थामा रोक लगाउनु कदापी उचित होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताविपरित हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको छ । त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन नियमावली तयार हुने प्रकृयामा छ । नियमावलीले समायोजन ऐनलाई प्रष्ट्याउँछ । नियमावलीमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । यो प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति मारमा पर्ने सम्भावना छ । कृषि, पशु सेवा, वन, सर्भेयर, ओभरसियरलगायत क्षेत्रका मध्यमस्तरका जनशक्तिको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्थाको सृजना हुने देखिन्छ । प्रशासन सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई अध्ययनका लागि समस्या छैन । तर, प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई भने पढ्न सहज छैन । न कलेज पर्याप्त छन् न त प्राइभेट पढ्न नै सहज थियो । प्राक्टिकल कक्षा हुने भएकाले प्राविधिक क्षेत्रमा नियमित क्लास लिनु आवश्यक छ । यी कारणले सहजरूपमा शैक्षिक योग्यता बढाउन नसकिने अवस्था छ । तसर्थ यसलाई सम्बोधन गर्न कृषि, पशुसेवा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश गरेको अनुभवका आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्मचारी समायोजन नियमावलीले एउटै प्रावधान राखेकाले प्राविधिक मध्यमस्तर जनशक्ति मारमा पर्ने सम्भावना छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको ज्येष्ठता (बरिष्ठता) र शैक्षिक योग्यताको आधारमा एक तह बढुवा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने ट्रेड युनियनले निजामती सेवाभित्र कस्ता–कस्ता प्रकारका जनशक्ति छन् ? कसरी समायोजन गराउँदा न्यायपूर्ण हुन्छ ? यी विषयमा गम्भीर छलफल नगरी सुझाव दिएको देखिन्छ । यसलाई छलफल गरी पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । नत्र कर्मचारीले आस्था राख्ने र नेतृत्व गर्ने संस्थाप्रति कर्मचारीको विश्वास घट्न सक्छ ।
स्नातक (एमबिबिएस) पास गरेको व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्दा आठौं तह र स्नातक (विभिएस एण्ड एएच) पास गरेको व्यक्तिले पशु स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्दा सातौँ तहमा प्रवेश हुने व्यवस्था छ ।
एउटै स्तरको योग्यता हुँदा पनि सेवा प्रवेश गर्दा तह फरक हुने अवस्थाले सेवामा विभेद हुने अवस्था रहन्छ, जुन न्यायोचित हुँदैन । पशु सेवासँगै कृषि, वन, सर्भेयर, इन्जिनियरिङ सेवाभित्रका जनशक्तिमाथि समेत अन्याय हुनसक्छ । आठौँ तहमा पुग्न पाँच वर्ष कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
राज्य पुनर्संरचनासँगै कर्मचारीलाई विभिन्न तहमा समायोजन गर्दा जनतालाई प्रभावकारी सेवा र सहज पहुँच हुने गरी समायोजन गर्न जरुरी छ भने कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउँदै कार्यक्षेत्रमा ऊर्जाका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ । लोकतन्त्रको मूल आधारलाई निजामती कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीले पनि उपभोग गर्ने र लोकतान्त्रिक मुलुककारूपमा देशलाई परिभाषित गर्दे ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गराउँदै ट्रेड यूनियन व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । ट्रेड युनियनले सबै सेवामा कार्यरत कर्मचारीका समस्यालाई आपसी छलफल गरी सशक्त रूपमा उठाउने र नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । प्राविधिक क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट विश्लेषण गरी जायज विषय ट्रेड युनियनले पनि उठाउने र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनलाई ‘शत्रु’कारूपमा हेर्नुहुँदैन । ट्रेड युनियनले पनि आफ्नो दायरामा काम गर्नुपर्छ । तसर्थ, प्रशासकले ट्रेड युनियनले उठाएका विषय उचित ढंगले सम्बोधन हुने र आवश्यक हरेक प्रकृयामा सहभागी गराउने तथा अपनत्व लिने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
कार्तिक २४ गते, २०७४ - १३ः२९ प्रकाशित
कर्मचारी ट्रेड युनियन निजामती सेवा रामप्रसाद मेहता स्थानीय तह
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ आजै राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै(पूर्ण पाठसहित)
तीन सचिवको सरुवा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केदारबहादुर अधिकारी
मंसिर २२ गते, २०७५
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव ‘ज्येष्ठता र कार्यक्षमता’का आधारमा खटाइने
ऊर्जा सचिव उपाध्यायद्वारा पदबाट राजीनामा
मन्त्री क्वाटर भैंसेपाटी सारिँदै, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि पनि भवन निर्माण गरिने
यी हुन् १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० ताजा निर्णय
समायोजन अध्यादेश सार्वजनिक नहुँदै कर्मचारीमा असन्तुष्टि, कार्यान्वयन हुनेमा शंका
खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धकको जागिर चट्
अझै रोकिएन विदेश भ्रमणमा कर्मचारीको मनपरी
खाद्यसंस्थानका कर्मचारीलाई मन्त्री यादवको निर्देशन : व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा संस्था सुधार्नेतर्फ लाग्ने
सचिवविहीन नौ स्थानीय तहका ५४ वडा